Ahoana ny fomba hanamboarana zezika ho an'ny zaridaina sy zaridainao isan-dingana - Ikkaro
firosoana >> zaridaina >> Fananganana compost >> Ahoana ny fomba fananganana compost
Fa maninona no zezika?
Misy izany antony maro hanaovana zezika. Miresaka momba ny zezika natao an-trano aho. Ireo nitaona ahy hanao izany dia:
Araraotiko ny fako biolojika be dia be izay lasa nanary fako.
Ampiasaiko ihany koa ny sisa tavela amin'ny fanapahana sy ny fanetezam-boaloboka sisa tavela amin'ny antontam-bato ao amin'ny tanimboly miandry ny hodorana
Mahazo compost ho an'ny zaridaina aho ary mahay manatsara ny tany
Dingana 1. Safidio ny tranokala sy ny composter
Safidio ny toerana sy ny mamporisika izay hanananao. Napetrako teo amin'ny toerana tsy maharitra eo anelanelan'ny ampongabendanitra 2, toerana misy alokaloka be satria tsy nomaniko ny faritry ny tanimboly izay tiako hamelana azy maharitra.
Ataoko fa efa manana composter ianao, raha tsy izany dia afaka manao ny tsy tianao ianao ilay nataoko tamin'ny paleta, fa na tsy tianao aza ny manasarotra azy dia misy olona manao azy amin'ny tany ka manarona azy amin'ny labasy.
Safidy hafa izany mividy iray.
Aza matahotra ny tsy hanana composter, misy ny olona manao ny antontam-bato aza amin'ny tany ka manarona azy amin'ny labasy.
Dingana 2. Palitao voalohany
Manomboha composting mivantana amin'ny tany, aza mametraka fototra. amin'ity fomba ity, dia handraoka ireo leachate noforonina.
Ho an'ny sosona voalohany dia manome soso-kevitra izy ireo manomboka amin'ny Brown, izany hoe, miaraka amin'ny ravina maina, shavings, sns. Nanomboka tamin'ny sosona ravina medlar maina aho.
Alefaso ny ravina, ampio rano amin'ny akselatra, novidiana tsara, voaomana tsara mifototra amin'ny azota. Fa avia, ampy ny rano.
Dingana 3. sosona faharoa
Manomboka izao hanomboka hanao sandwich isika. Hatsipintsika ny sisan'ny fanapahana, ny ahitra, ny zava-maniry, ny voankazo, ny legioma, sns. ary hamorona sosona maitso izay hosaronantsika sosona volontany hafa avy eo.
Isaky ny sosona tsirairay dia mila manampy rano ianao handemana.
Dingana 4. Mamontsina ny antontam-bato
Ny olona sasany toa ahy mando ny antontam-bato, izany hoe manampy rano rehefa ampiana ny sosona, ary ny sasany kosa aleony manao azy farany. Misy aza ireo manala ireo sosona hampifangaro ny zava-drehetra ary, hoy izy ireo, dia manafaingana ny fizotrany satria ny vokatra azota dia mifandray amin'ny an'ny karbaona.
Dingana 5. Fijerena stack
Tsy maintsy atao tsindraindray izany. Ny tanjona dia ny hananana thermomère compost hahitana ny maripana ahatongavan'ny antontam-bokatra, satria tsy tokony ho eo anelanelan'ny 60 sy 70ºC izany.
Raha mihoatra ny 70 dia midika izany fa niaraka tamin'ny azota isika, ny fitaovana maitso ary tsy maintsy manofa rivotra isika, izany hoe esory ny antontam-bato ary ampio volontany na karbonina.
Raha latsaky ny 60 taona dia tokony ho hitanao raha tsy misy hamandoana izy ary raha nanampy singa Nitrogen vitsivitsy izahay ary raha izany dia ampio bebe kokoa ny antontam-bolantsika.
Nanomboka tamin'ny tsy nanan-javatra aho, ary nanararaotra izay an-tanako, saingy marina izany misy fitaovana tsy hita ary heveriko fa hiafara amin'ny fividianana na rehefa azo atao ny fananganana azy ireo. Ireto fitaovana ireto dia:
Mpanampy. (Afaka mividy ianao eto o eto) Nahavita iray aho, tsy dia misy ezaka firy ary misy vokany ilay izy, fa raha te hanana varotra ianao dia amidy modely maro izy ireo.
Gallow. (Vidio eto) Antsoina koa hoe fork na fork, dia afangaro amin'ny fampifangaroana ny antontan'isan'ny compost io rehefa lo io ary koa manetsika ilay compost efa vita
Aerator / Mixer. (Vidio eto) Araka ny anarany, fitaovana ampiasaina hampifangaroana ny zezika sy hanangonam-bokatra azy io, ahafahantsika mamoaka tsiro koa hahitana ny fizotran'ilay fizotrany. Fitaovana tena tsotra izy io.
Thermometer ny zezika. (TENA ILAINA HERE) Tsy misy fisalasalana izay malahelo indrindra ahy. Thermomètre lava iray ihazonantsika ny antontam-bato na ny silo ary hitantsika ny hafanana ao anatiny. Raha raisina ny mari-pana dia ho fantatsika ny fandehanan'ny composting ary raha mila manao zavatra isika, mandena, mamadika, manampy karbaona na nitrate bebe kokoa, sns.
Throttle. (Fividianana eto) Hitako tamin'ny Internet izany, na dia mbola tsy nanandrana azy aza aho. Misy ny olona mametraka akselatra. Azo atao ao an-trano ihany koa izany, mamela anana maitso, sisa tavela, sns ao anaty rano mandritra ny 10 andro. Ny fampiasana labiera aorian'ny fanjavonan'ny alikaola dia misy aza ny olona mampiasa urine izay manankarena be azota amin'ny maha-mpandeha azy.
Inona no azoko apetraka ao amin'ny compost?
Ny fitaovana apetrantsika ao amin'ny antontam-bokintsika dia zaraina ho karazany roa. Green, izay rehetra manome azy azota sy volontany, izay no manome karbaona azy.
Ny composting dia dingana iray hanovantsika ny zavatra biolojika ho lasa zezika
Verde (saika na inona na inona)
Sombin-legioma sy legioma tsy masaka
eny ny citrus koa
zezika, indrindra ny hebivores
Ny fanetezana maina dia mijanona
taratasy sy baoritra tsy misy ranomainty
Raha mandinika ny tahan'ny famotahana ny fitaovana isika, dia afaka mizara ho 3 karazana ny fitaovana, fa tsy hadino foana fa ny fifangaroan'ny maitso (nitrogena) + volontsôkôlà (karbaona) no mamorona ny zezika.
Ravina vaovao, tapa-ahitra, zezika ary zavamaniry sy zavamaniry rehetra misy ravina malefaka.
Volo, voankazo, legioma, ahidratsy izay ny fotony na ny raviny tsy malefaka, zezika na fandriana misy mololo, fanetezana fefy malemy.
Tena lo ny lo
Sampana, hodi-atody, vato voankazo, akorandriaka, poti-kazo, famoahana.
Ash, gazety, baoritra
Inona no tokony ampiasaina?
Miankina amin'ny olona vakinao fa miresaka momba ny Dopwding 40-60, 50-50 na 60-40 izay tadiavintsika tsara amin'ity torolàlana ity dia manome soso-kevitra 60-40, izany hoe 60% ny zava-maitso ary 40% volontany, ity Hiakatra be ny mari-pana, ary tokony hitandrina isika mba tsy hanadino izany.
Misy angano maromaro izay nofoanan'i Dowling.
Citrus. Betsaka ny olona tsy mieritreritra fa afaka manampy citrus amin'ny antontam-bato. Ny hany zavatra raha manampy betsaka ianao dia ny mifehy ny pH.
toetrany. Tsy misy olana amin'ny fampiasana zavamaniry miorim-paka
Zavamaniry voa. Toy izany koa no mitranga, maro ny olona mino fa tsy tokony hanangom-bokatra zavamaniry manana voa ianao, satria hijanona ao anaty zezika izy ireo ary hitsimoka rehefa ampiasainay. Fa tsy izany no izy.
Raha vita tsara ny zezika, mahatratra 60 - 70º C ny mari-pana mihoatra ny ampy hamonoana ny faka sy hampiatoana ny masomboly. amin'izay tsy hanananay olana rehefa mampiasa ny vokatra azo
Ny zezika voalohany
Ataoko an-tsoratra ity compost ity voalohany, hahitako izay ataoko ary raha toa ka ratsy ho ahy ny afaka mianatra any amin'izay tsy nahombiazako.
Manomboka amin'ny 25-10-2020 aho manamboatra fitoeram-bokatra avy amin'ny paleta hazo ary manampy ravina medlar maina sy ahitra maina, lavenona. Raha tavela ny zava-maitso, ahitra, voankazo ary legioma, tany fisotroana kafe sy ny lavarangana bitro misy antsika izay ankoatry ny dikany dia namoaka taratasy izay no mahatonga azy io mandray ny pee ary tsy maimbo. Mando amin'ny rano aho isaky ny sosona.
Mameno hatrany aho ary amin'ny 1-11-2020 dia mameno ny antsasaky ny composter, miaraka amina fanomezana kely misy voankazo sy legioma, miaraka amina taratasy sy fako bitro, fa indrindra amin'ireo zavamaniry aubergine, izay nesorin'ny mpifanila vodirindrina ary hodorany ary izaho nitandrina azy ireo. maina be ny antontam-bato ary manondraka betsaka kokoa aho, manisy rano amin'ny pellets zezika aho hanampiana azota ary hanafainganana ny fizotrany.
8-11-2020 Ampiako taratasy bitro sy sisan-dakozia ary sosona volontany.
18-11-2020 Feno zava-maniry izay esoriko sy ampiarahiko hamandoana, mila afangaro tsara daholo ny zava-drehetra.
Sokajy Fananganana compost, Patch legioma Ticket navigation
Ahoana ny fanamboarana tsipika nylon mora vidy ho an'ny mpanamory Bosch
1 Fa maninona no zezika?
2.1 Dingana 1. Safidio ny tranokala sy ny composter
2.2 Dingana 2. Palitao voalohany
2.3 Dingana 3. sosona faharoa
2.4 Dingana 4. Mamontsina ny antontam-bato
2.5 Dingana 5. Fijerena stack
3 Fitaovana zezika
4 Inona no azoko apetraka ao amin'ny compost?
6 Ny zezika voalohany